9 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t manampy ny namana manana olana ara-pifandraisana - Fifandraisana
Ahoana ny fomba hanampiana namana iray misy olan'ny fifandraisana
Mety ho sarotra ny fifandraisana indraindray.
Arakaraka ny ifanatonanay akaiky kokoa, ny mety hahitana ny fifandonana amin'ny toetra na hahitana singa an'ny olona hafa izay tsy tiantsika.
ny fanekena anao tsy hahita fitiavana mihitsy
Mety ho quirk toetra amam-panahy, zavatra ratsy sasany izay tsy fantatra mialoha, fotoan-kevitra ratsy, na sahirana fotsiny ilay olona.
Ny tsirairay dia nanala ny sasany tamin'ny fahasosorany tamin'ny sakaizany tamin'ny namana iray.
Ary amin'ny maha-namana anao, mety ho sadaikatra na sarotra ny mitady fomba hanohanana.
Te-ho eo hanohana ny namantsika izahay, fa ny fomba fanaovanay azy io dia afaka miova isaky ny toe-javatra.
Ankoatr'izay, ianao dia afaka mamorona olana be dia be ho anao amin'ny alàlan'ny alàlan'ny enta-mavesatry ny namana be loatra.
Ny fanampiana ny namana manana olana ara-pifandraisana amin'ny fomba mahasalama sy mamokatra dia mitaky fomba voalanjalanja.
Mametraha fetra hatrany ary tadidio fa afaka manao zavatra araka izay tadiaviny izy ireo.
Misy fetra voafaritra tianao ho apetraka ary harahinao mba hahafahanao manohana ny namanao nefa tsy manana ny olana mahazo azy ireo.
Ianao koa dia te hisoroka ny fisamborana valinteny na fianjerana amin'ny 'fametahana ny oronao amin'ny orinasan'olon-kafa.'
Ireo torolàlana ireo dia hanampy anao hanao roa.
1. Aza manome torohevitra mivantana raha tsy hoe angatahina manokana. Ary na izany aza, mety tsy izany.
Ny torohevitra mivantana dia tsara rehefa mila fanakianana mahasoa momba ny zavatra mitranga na ny zavatra hatao ianao.
Ny olana miaraka amin'ny torohevitra mivantana dia hoe io dia mandray andraikitra ambony amin'ny olan'ny hafa.
Rehefa manome torohevitra mivantana ianao dia milaza amin'ny namanao amin'ny fomba ambany kokoa fa mahay kokoa ianao manapa-kevitra ny amin'ny fomba tokony hitondrany ny fiainany noho izy ireo.
Tsy hafatra tianao halefa izany.
Raha raisin'izy ireo ny torohevitrao dia mipoaka ny tarehiny dia hanome tsiny anao izy ireo noho ny ratra nataony.
Misy eritreritra iraisana fa tsy maninona ny manome torohevitra raha angatahina aminao izany, fa tsy marina foana izany .
Mety hiaina valiny avy amin'ny namanao na ny sakaizanao ianao, na tsara ny torohevitra na tsia.
2. Tadidio fa ny lafiny iray amin'ny tantara ihany no hainao.
Namanao ny namanao. Raha miresaka aminao momba ny olan'ny fifandraisan'izy ireo izy ireo, dia mety manana hevitra somary mendrika ianao hoe iza izy ireo amin'ny maha-olona azy ireo ary misy topy maso momba ny fiarahan'izy ireo.
Ny olana dia mety manana fotsiny ianao fahitana voafetra ny zava-mitranga eo amin'ny fifandraisan'izy ireo.
Mampihetsi-po ny maka izay lazain'ny namanao amin'ny lanjany, fa ho loharanom-baovao mitanila izy ireo.
Mety ho diso ny torohevitra omenao manoloana an'io toe-javatra io satria mety tsy takatry ny namanao ilay olana, mety hanakona ny fitsarany ny fihetsem-pony, na mety tsy tena tso-po tanteraka izy ireo.
Lavitra ny tonga lafatra ny olona. Mety ho fahadisoana lehibe ny fanomezana torohevitra ny amin'ny tenin'izy ireo.
3. Mila miaina ny vokatry ny safidiny izy ireo.
Te hanampy ny namanao ve ianao?
Tsara izany. Izay ny maha-namana tsara.
Nefa tsy maintsy tadidinao fa ny fiainany, ny fijaliany ary ny fanapahan-kevitr'izy ireo dia ny zavatra rehetra ilain'izy ireo iainana sy iasanany.
ny fomba hahatonga anao ho hendry
Tsy maintsy miaina amin'izay fanapahan-kevitra horaisiny izy ireo.
Ary tsy tianao izany ho toro-hevitra maharikoriko fa mbola tezitra aminao izy ireo taona maro taty aoriana satria ny eritreritrao no nitarika azy ireo hidina amin'ny lalan-diso ho azy ireo.
Ny mety aminao dia mety tsy mety aminy - ary tsy maninona. Ho somary ho maloka ny fiainana raha mitovy isika rehetra, miaina amin'ny zavatra niainana mitovy.
4. Mety hitongilana na heverina ho mitanila ianao.
Namanao izy ireo, sa tsy izany?
Tsy misy dikany ve ny fiandananao?
Tsy amin'ity toe-javatra ity.
Na manana fampiasam-bola mampihetsi-po ianao amin'ny toe-javatra na tsia, dia hiseho ho mitongilana ianao raha manohana ny namanao, na dia diso aza ilay olona iray hafa.
Izany dia hitondra tsy fifankahazoana bebe kokoa amin'ny fiainanao raha mihemotra ilay olon-kafa ary miaro tena amin'ny fanafihana heverina.
Ary ahoana raha tsy mifanaraka amin'ny namanao ianao?
Avy eo izy ireo dia afaka miampanga anao ho tsy namana tsara amin'ny alàlan'ny fanohanana sy fanamafisana azy ireo, midika izany fa mety tsy hiresaka aminao izy ireo.
Tsy fitovizan-kevitra sy korontana kokoa fotsiny izany hiatrehana ny fiainanao.
hararaotina addison rae
Ahoana ny fomba hanampiana namana iray amin'ny fisarahana (+ Inona no / tsy holazaina)
Ahoana no ahafahako manampy ny namako amin'ny olan'ny fifandraisan'izy ireo?
Ny fanampiana namana amin'ny olan'ny fifandraisan'izy ireo dia tsy dia sarotra toa ny namboarina.
Raha ny marina dia mety ho dingana tsotra amin'ny fihainoana mavitrika sy fanohanana misy dikany izany.
1. Manatreha ho an'ny namanao amin'ny fihainoana mavitrika.
Ny fihainoana mavitrika dia manome ny sainao feno sy tsy mizarazara ho an'izay rehetra mihaino anao.
Ny famonoana ny fahitalavitra, ny fametrahana ny telefaona, ary ny tsy fieritreretana ny fomba hamalianao rehefa mihaino ianao.
Ezaka iraisana io mba hampisehoana amin'ny olona iray hafa, “Ho anao aho, ary manan-danja ianao.”
Ny fihainoana mavitrika dia fomba iray mahomby hanehoana fa miaraka amin'ny namanao amin'ny fahoriany ianao.
Ny fanatrehanao dia mety hanampy bebe kokoa noho ny tsapanao. Ny tsy fahatsapana irery irery dia afaka manao zava-mahatalanjona amin'ny fahaizan'ny olona mitondra ny zava-tsarotra eo amin'ny fiainana.
2. Mametraha fanontaniana manazava hahafahanao mahazo antoka fa azonao ilay olana.
Anontanio izay hevitra mety tsy hainao.
Mety ho zavatra tsy nampitaina tsara na antsipirihany tsy milahatra tsara izany.
Mora ho an'ny olona iray ny tsy mijery na misavoritaka ny mombamomba azy rehefa any amin'ny sahirana ara-tsaina izy ireo.
Aza misalasala mametraka fanontaniana raha hitanao fa tsy azonao ny nolazaina anao.
Azonao atao koa ny mamerina azy ireo hiverina aminy ny olana mba hahazoana antoka fa azonao izany. “Raha azoko tsara ny anao dia ny olana…”
3. Anontanio ny namanao hoe inona no vahaolana nodinihin'izy ireo momba ilay olana.
Amin'ny fangatahana azy ireo ny vahaolana efa nodinihiny dia afaka manampy azy ireo amin'ny fomba mahomby kokoa izy ireo hahita ny vahaolana mety amin'izy ireo.
Mety efa fantatr'izy ireo hoe inona ny valiny , fa mety misalasala ny tenany na tsy te-handray andraikitra amin'izany.
Hanampy anao hahatakatra tsara kokoa ny olana amin'ny fanomezana loharanom-baovao fanampiny izay mety tsy nobeazin'ny namanao teo aloha izany.
4. Manolora hevitra sy sosokevitra aroson'ny eritreritrao hanampy amin'ny famenoana ny banga.
Aza manao fanambarana momba ny vady na ny fifandraisana.
Fa aleo ataovy toy ny mieritreritra mafy ny eritreritrao, mba hahafahanao manolotra ny fomba fijerinao nefa tsy milaza amin'ny namanao ny zavatra tokony hataony na ny tokony ho fahatsapany.
Mampiasà fehezanteny toy ny:
“Noheverinao ho vahaolana ve ny XYZ? Ahoana ny hevitrao momba izany? ”
“Ary ahoana ny XYZ?”
“Efa nanandrana XYZ ve ianao?”
5. Omeo fanampiana mivantana raha anontaniana ianao, ary mahazo aina ianao amin'izany.
Ny olona sasany dia tsy mitady fomba malefaka. Tian'izy ireo ny handre torohevitra mivantana na hahazo fanampiana amin'ny toe-javatra iainan'izy ireo.
Raha mahazo aina ianao amin'izany, dia zavatra azonao atao izany.
Ny olona akaiky antsika matetika dia milaza amintsika izay tiantsika ho re fa tsy izay tokony ho rentsika.
Indraindray isika dia mila maheno am-pahatsorana fa mandray fanapahan-kevitra diso isika na misafidy lalana manimba.
Indraindray dia mila fanampiana azo tsapain-tanana kokoa isika rehefa tsy mandeha tsara ny toe-javatra iray.
Tsy maninona koa ny manao.
Fa mba hisorohana ny mety ho fihoarana noresahina tetsy aloha dia azonao atao foana ny manampy ny fanalanao kely ny torohevitra omenao:
'Mihainoa, tsy afaka milaza aminao izay mety aminao aho amin'ny fahatokisana 100%. Tsy akaiky akory. Fa raha tena tadiavinao ny torohevitro dia omeko anao izany.
“Raiso ho mpitari-dalana fotsiny ny lazaiko fa tsy zavatra tsy maintsy ataonao. Fiainanao izany ary tokony hieritreritra tsara izay lazaiko ianao alohan'ny hanapahanao hevitra. '
mandra-pahoviana no miandry handefa hafatra aorian'ny daty voalohany
lalao brock lesnar vs kurt angle ironman
inona no hatao rehefa mankaleo be ianao
hatsiaka vato vs bret hart
zava-misy mahatsikaiky holazaina momba anao